Williams' career-best leads Zimbabwe to victory | Cricbuzz.com
Cricbuzz Staff in Bulawayo, Zimbabwe • Last updated on Sun, 05 May, 2013, 09:27 PM
Zimbabwe's batsman Sean Williams plays a shot during the second of the three ODI cricket series matches between Zimbabwe and Bangladesh on May 5, 2013 at the Queens Sports Club in Bulawayo. Williams hit a career-best 78 not out as Zimbabwe beat Bangladesh by six wickets in the second one-day international in Bulawayo on Sunday to set up a series decider. © Cricbuzz
Zimbabwe batsman Hamilton Masakadza on the final day of the second test cricket match between Zimbabwe and Bangladesh, on April 29, 2013 at the Harare Sports Club. Zimbabwe defeated Bangladesh by six wickets in the second One-day International at Bulawayo on Sunday to level the series at 1-1. © Cricbuzz
Sean Williams hit a career-best 78 not out as Zimbabwe beat Bangladesh by six wickets in the second one-day international in Bulawayo on Sunday to set up a series decider.